မောင်ရင်ငတေ ● မိုဒီလျာနီရဲ့ ယန်းဟေဗျူတန် – MoeMaKa Burmese News & Media
မိုဒီလျာနီ ၁၉၁၇ ခုနှစ်က ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်လဲလျောင်းသူ အမည်ရ အဲဒီ ပန်းချီကားချပ်ကို ပါရီ မွန့်မတ်ထ်တောင်ခြေ Pigalle ရပ်ကွက်ရှိ Galerie Berthe Weill ပြခန်းမှာ ချိတ်ဆွဲပြသဖို့ကို ပြင်ဆင်နေခိုက်မှာ တွေ့မြင်သွားခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်မကြီးများက အမြင်မတော်ပါဘူးဟူ၍ ရဲခေါ်တိုင်တန်း လိုက်မှုကြောင့် တပြားတချပ်မှ မရခဲ့ပါဘဲ မိုဒီလျာနီတို့အုပ်စု ဂတ်တဲရောက်ခဲ့ရတဲ့ ပန်းချီကားချပ်ပါ။ အခုလို ဒီကနေ့အခါမှာ ဒေါ်လာသန်း ရာနဲ့ချီပြီး ရလိုက်မယ်ဆိုရင် မိုဒီတယောက် မွန့်မတ်ထ်ကနေမွန့်ပါနပ်တင်မက ရှန်ပိန်နယ်ထိ သော်လည်းကောင်း ကော့ညှက်နယ်ထိ သော်လည်းကောင်း လမ်းတ လျှောက် သောက်လို့ ကောင်းလိုက်မယ် ဖြစ်ခြင်းလား မိုဒီရေ ….
ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ ဒေါ်လာအစိမ်းရွက်တွေကို မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ခြေလို့ ဒေါသတကြီးနဲ့များ အဲဒီတရုတ်ကြီး မျက်ခွက်ကို ခင်ဗျား ကောက်ပေါက်လေမလား မိုဒီ ရေ … ခင်ဗျားအစား ရင်မောစွာ တွေးမိရခြင်းပါ ဗျာ၊
တောင်းပန်ပါတယ် မိုဒီ …. ရေ . … ဒီဒို . .. …. ရေ …… ကိုယ်ရွှေကိုယ်မျိုးတွေအစား၊
အဲဒီ စာအုပ် ….. Les Montparnos စာအုပ်ထဲမှာကတော့ မိုဒီလျာနီနဲ့ သူ့ရဲ့ ယန်းဟေဗျူတန်တို့ကို (Modrulleau et Haricot-Rouge) အဖြစ်တင်စား ဇာတ်ကောင်ထားပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။
André Salmon (1181-1969) Poète, Romancier, Journaliste, Critique d’Artet Écrivain Français.
← စံပယ် ● နေခြည်လည်းရပါစေ၊ မြေဆီလည်း ဝပါစေ
ရိုးခက် ● ထင်မထားခဲ့တဲ့အရာတွေ →